महिलाको शत्रु को ? – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७६ असार २१ गते शनिबार १४:५९ मा प्रकाशित
एकजना दिदीले भन्नु भो,‘महिलाको शत्रु महिला नै हो । एकअर्काको रिस डाहा गर्छन् । काम गर्नलाई त महिला भन्दा पुरुष नै ठीक हुन्छन्, सजिला पनि हुन्छन् ।’
उनको भनाइप्रति प्रतिक्रिया दिन सकिँन । हो दिदी हजुरले ठीक भन्नुभो, भनँु भने म उनको भनाइमा असहमत थिएँ । होइन दिदी हजुरले गलत भन्नु भो भनाँै भने मैले भोगिरहेको र देखिरहेको परिवेशले सहमत थिए कि भन्ने पनि बनायो ।
त्यसपछि एउटै प्रश्न खेलिरह्यो, के महिला महिलाबिचको सम्बन्धमा रिस र डाहाले मात्र स्थान पाउँछ ? महिला साथीहरु बिचका सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्दैनन् र ?
यही प्रश्नलाई केलाउने क्रममा मैले आफ्ना महिला साथीहरुबिचको सम्बन्धलाई केलाउने प्रयास गरँे । मेरा कति महिला साथीहरु छन् त जसलाई म आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सक्छु, मेरा सफलताहरुमा खुसी हुने कति महिला साथी छन्, कति साथी छन् जसले आपत्विपत् परेको बेलामा पछाडि खुच्चिङ खाइस् भन्दैनन् र निःस्वार्थ रुपमा सहयोगको भावना राख्छन् । मैले हातका पूरा औँला भाँच्न सकिन ।
यही क्रममा म आफैले पनि कति महिला साथीहरुका बारेमा टिका टिप्पणी गरँे होला, उनीहरुको यथार्थलाई नबुझिकन आलोचना गर्न तिर लागँे होला, कतिको सफलता देखेर आफूलाई असुरक्षित ठाने होला, सोचेर पछुतो लाग्यो र अब त्यस्ता आलोचना गर्ने र गराउने वातावरणबाट सकेसम्म टाढा रहन्छु भन्ने प्रण गरँे । यहाँ महिला महिलाबिचको सम्बन्ध सुमधुर हँुदैन भन्ने दृष्टिकोणलाई प्रस्तुत गरिरहेकी छैन । यथार्थको धरातलमा उभिएर मेरा आफ्ना भोगाइहरुले सिकाएको बुझाइलाई मात्र प्रस्तुत गरिरहेकी छु ।
वर्षोदेखि हाम्रो समाजको सन्दर्भममा सासू बुहारीका सम्बन्ध, नन्द भाउजूका सम्बन्ध, देउरानी जेठानीका सम्बन्धहरुलाई सधैँ एउटै स्वरुपमा देखाइयो । चलचित्रदेखि विज्ञापनसम्मका महिला पात्रहरुको सम्बन्ध सधै उही झै–झगडा गरिरहेको, सासू बुहारी लुछालुछ गरिरहेको, कहिले छुच्ची सासु र सोझी बुहारी, कहिले झगडालु बुहारी र आदर्श सासू, नन्दले भाउजूको कुरा पछाडि काटिरहेको, आफ्ना महिला साथीले अर्को साथीसँग रिसले मुर्मरिएकोे आदि दृश्यहरु सामान्य रुपमा देखाइए ।
के महिला महिलाबिचको सम्बन्धको वास्तविकता नै यही हो त ?
सानैमा यस्ता दृश्यको प्रभावले सासूले बुहारीलाई दमन मात्र गर्दछन् भन्ने म बुझ्दथेँ तर वास्तविकता मेरो घरमा हजुरआमाले आमालाई गरिरहेको व्यवहार र उहाँहरुको सम्बन्ध फेरि सुन्दर पाउथँे । नेपालको सन्दर्भममा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उत्पादन हुने चलचित्र, टेलिसिरियलहरुले पनि महिला नै महिलाको शत्रु हुन्छन् भन्ने किसिमको दृश्यहरु देखाउथँे र अहिले पनि देखाउँछन् ।
जस्तो डिज्नीको सिन्ड्रेलामा उसका सौतेनी आमा र दुई छोरीहरुले गरिरहेको दमनदेखि हिन्दी टेलिसिरियलहरुमा देखाइने महिलाहरुको सम्बन्धमा सधै रिस र डाहाले मात्र स्थान पाइरहेको हुन्छ । र महिला महिलाबिचको सम्बन्ध नकरात्मक हुन्छन् भनि प्रस्तुत गरिएको हुन्छ । किन हामी महिलाका सम्बन्धहरुलाई यसरी चित्रण गरिए ? ससुरा र ज्वाइँका सम्बन्धहरु अथवा पुरुषका आफ्ना पुरुष साथीहरुबिचको सम्बन्धमा नकरात्मक रुपमा प्रस्तुत गरिएको हामी कमै भेट्छाँै ।
यी परम्परागत सोचका परिणाम हुन् कि हाम्रो समाजको यथार्थ, बहसको विषय रहनेछ । हामी सबै एक अर्का भन्दा भिन्न छौँ । हाम्रा भोगाइ, सिकाइ, बुझाइ, आवश्यकता, जीवनप्रतिको धारणा सबै फरक छन् । तर हामी महिला हुनुले नै हामीलाई समान बनाउँछ । पहिलोपटक महिनावारी हुनुको कौतुहलता र डरदेखि प्रश्रवका पीडासम्मका हाम्रा भोगाइहरु समान छन् ।
महिला भएकै कारणले सहनुपरेका हिंसाहरुका दुःखाइ हामीबिचका समानताहरु हुन् । हाम्रा भोगाइहरुलाई हामीले भन्दा अरु बढी कसले बुझ्न सक्छ र ? एक महिलाको समस्या अर्को महिलाले नै बुझ्न सक्दछ । यो भन्दैमा पुरुषले महिलाको पीडा बुझ्नै सक्दैन भन्ने हैन, बुझ्दछन् तर आफैले भोग्नु र महसुस मात्र गर्नुमा फरक हुन्छ । समानुभूति र सहानुभूतिले दुई भिन्न अर्थ राख्दछ ।
असुरक्षित प्रतिस्पर्धामा उत्रनु र कसरी हुन्छ खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हाम्रोमा नयाँ हैन । एकको सफलतामा अर्कालाई खुसी हुन आउँदैन । बरु यसले यति ग¥यो मैले गर्न सकिन भन्छौैँ र एकअर्कालाई प्रतिद्वन्द्वीको रुपमा हेर्छौ । प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ तर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुले महत्व राख्छ ।
मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भनेको जस्तै अगाडि ठिक्क पछाडि चाहिँ त्यही मान्छेको बारेमा नकरात्मक टिप्पणी गर्दे हिँड्नुले हाम्रा यथार्थ छविलाई प्रस्तुत गर्छ । महिला महिलाबिचमा प्रतिस्पर्धा हुनुकोे कुनै अर्थ छैन । किनकि यो ठूलो लडाइँको मैदानमा हामी एउटै पक्षका सारा योद्धा हौँ । हामीले एकअर्कालाई चोट पु¥याउनु भनेको आफैलाई नै चोट पु¥याउनु हो । शारीरिक चोट भन्दा भावनात्मक चोट अझ गहिरो हुन्छ ।
महिला सशक्तीकरणका पाटोलाई हामीले आपसी मेलमिलापबाट सुरु गर्नुपर्छ । घरदेखि काम गर्ने ठाउँसम्म, हामी जहाँ पनि पुग्छाँै एकले अर्कालाई सम्मान र सहयोग गर्ने बानी बसाल्नु जरुरी छ । महिला अधिकारदेखि सशक्तीकरणको लडाईँमा हामी छौँ तर सुरुवात हाम्रा आफ्नै साना तर ठूला महत्व राख्ने क्रियाकलापहरुबाट हुनुपर्छ ।
हामीले हरेक महिलाको सानोदेखि ठूला उपलब्धीहरुलाई उत्सवका रुपमा मनाउन जरुरी छ । चाहे ती हाम्रा मिल्ने महिला साथी हुन्, सँगै काम गर्नै महिला साथी हुन्, चिनजानको मात्र हुन्, धारणा नमिल्ने महिला साथी नै किन नहुन् सबैका उपस्थितिलाई हामीले कदर गर्नुपर्दछ । प्रतिस्पर्धीको भावना नराखी हरेकको उपलब्धीहरुलाई साझा उपलब्धी र सिकाई मान्नु जरुरी छ ।
पर्वत उद्योग वाणिज्य संघको चुनावी सरगर्मी, प्रजातान्त्रिक पक्षबाट अध्यक्षमा पौडेलको…
भीरकोटका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर
चितवनको इच्छाकामना–६ कुयालघारीमा पहिलोपटक बिजुली
धौलागिरी अस्पतालमा उपचाररत ११ पुरुष संक्रणमुक्त
बाढी पसेपछि अपरमादी हाईड्रोबाट विद्युत उत्पादन बन्द
२४ घण्टामा थपिए २८२८ संक्रमित, ३०८२ संक्रमणमुक्त
मनाङ : बाढीले तीन स्थानीय तह पूर्ण क्षतिग्रस्त
स्याङ्जाःजीप दुर्घटनामा एकको मृत्यु
पोखराःद आर्ट अफ लिभिङद्वारा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तरण
पोखराः नयाँबजारमा पहिरो गयो, सिद्धमार्गका घरहरु जोखिममा(भिडियो सहित)